သန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲများ - အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုမှာ * NIX | FromLinux | ChrisADR Linux မှ
သန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲများ - အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခု * NIX
ChrisADR | | အခြား
ပရိုဂရမ်များ၊ ပရိုဂရမ်များဖတ်ခြင်း၊ Linux နှင့် UNIX နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်အရာများကိုဖတ်ခြင်းကာလအတွင်းကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ရန်မတတ်နိုင်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိပါသည်။ Holy Wars (၎င်း၏အကောင်းဆုံးလူသိများအတွက်သန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲများ) ပြီးပြီ) ။
1 ပထမ ဦး ဆုံးသန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲလား
ပထမ ဦး ဆုံးသန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲလား
ကောင်းပြီဟူသောဝေါဟာရကိုတရားဝင်အားဖြင့်လူကြိုက်များခဲ့သည် Danny Cohen ကို အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၌တည်၏ endianness၊ ပိုမိုတိကျစွာပုံစံအကြားအငြင်းပွားဖွယ်ရာအပေါ် နည်းနည်း endian vs သူ့ကို Big-endian။ အများဆုံးစပ်စုသည် ဇွဲ bytes တွေကိုဖတ်တဲ့အစဉ်လိုက်သတ်မှတ်တယ်။ တစ်ခုစီကaကိုကိုယ်စားပြုတယ် အဘိဓမ္မာ ကွဲပြားခြားနားသောဤတူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သူတို့နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာလောကကိုနှစ်ခုခွဲခြားပြီးဂြိုဟ်တုငယ်များထုတ်ပေးသည် အလယ်အလတ်တန်းစားARM နှင့်အခြားနည်းပညာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောအကြီးမြတ်ဆုံးနမူနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် GNOME နှင့် KDE အကြားထာဝရစစ်တိုက်ခြင်း, ပြီးသားအဟောင်း vim နှင့် emacs အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပင် operating system ကိုအဆင့်မှာလူသိများမဟုတ်ပါဘူး Linux နှင့် BSD အကြားပြိုင်ဆိုင်မှု။ ဤရွေ့ကားဥပမာများ, မရေမတွက်နိုင်သောပို့စ်များ, ဆောင်းပါးများ, စာတမ်းများပင်၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ရပြီ libros။ ပန်ကာအချို့ရေးသားခဲ့သော O'Reilly on Bash စာအုပ်ကိုကျွန်တော်များစွာမှတ်မိသည် emacs၎င်းသည် keyboard shortcut များအသုံးပြုရာ၌ "သဘာဝ" မရှိခြင်းကဲ့သို့သော vim အားပုံမှန်မှတ်ချက်များမှထင်ရှားစေသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ဤအကြောင်းအရာများတွင်အချက်အလက်ပမာဏများစွာရှိသည်။
အပြင်းထန်ဆုံးပြိုင်ဆိုင်မှုများမှပင်ကောင်းသောအရာများမွေးဖွားလာသည်ကိုသမိုင်းကပြသခဲ့သည်။ C နှင့် C ++ ပြိုကွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချို့ကအချို့က puritans ဟုခေါ်ပြီးပြောကြသည် ငါ့ဘာသာစကားကပိုကောင်းတယ်။ (C လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်ကပြောနေသည်) သမိုင်းကြောင်းအရတစ်ချိန်တည်းတွင် C ++ သည် C အသစ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်များဖန်တီးရန်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သော်လည်းဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီးနှစ်ခုကွဲပြားသည်ဟုယူဆနိုင်သော်လည်းအတူတူနီးပါးနှင့်အတူမှတ်သားသင့်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့၏အမြင်အာရုံဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှိသည် မူဘောင် အသီးသီး KDE နှင့် GNOME များတွင်အသုံးပြုသော Qt သို့မဟုတ် WebKit ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒီ "ယှဉ်ပြိုင်မှု" ကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေးထားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိုးတက်စေပြီးနိုးနိုးကြားကြားရှိစေတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုလုံးဝနည်းပညာပိုင်းရှုထောင့်မှကြည့်သောအခါရွေးချယ်စရာများသည် "ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျ" ပိုကောင်းနိုင်သည်၊ ပိုဆိုးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ မြင်သာထင်သာ, ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအချိန်အတိုင်းအတာ၊ ဝန်၊ ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ကူးရသောအရာများအရဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အငြင်းပွားမှုများကိုခွန်အား ပေး၍ ဖုံးအုပ်ရန်လိုအပ်သည့်လိုအပ်ချက်များနှင့်သည်းခံရမည့်အန္တရာယ်များကိုပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်။ ဤအချက်မှာအရာဝတ္ထုများသည်ပိုမိုရှင်းလင်းပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကပconflictsိပက္ခများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ပြwhenနာပေါ်လာလျှင် ...
ဒါကအထိခိုက်မခံတဲ့အချက်ဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကိုသိပ်ပြီးမစဉ်းစားတော့ဘူး။ သင်၏ဖြေရှင်းချက်သည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်ဟုသင်စတင်ယုံကြည်လာသောအခါအစွန်းရောက်မှုများစတင်သည့်အချိန်အထိအရာအားလုံးသည်ကောင်းမွန်သည် အခြားမည်သည့်ထက်သာ။ ကောင်း၏ လူတိုင်းကမင်းသဘောတူသင့်တယ် ၎င်းသည် Open Source အားလုံး၏ရှုပ်ထွေးဆုံးအချက်များနှင့်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါအုပ်စုနှစ်ခုလုံးနှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရှိသည်, သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအတော်လေးဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားပြောပြရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည် နိုင်ငံရေးသင်သည်ငါ့ကိုသူတို့နှင့်အတူလိုက်လျှင်ငါတို့နှင့်အတူမလိုက်နှင့်။ ပြီးတော့သူ့ဘဝရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက်အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အလယ်တန်းအမှတ်အသား၊ မီးခိုးရောင်မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ယခုလူအများကကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများကိုသိပ်သဘောမတူကြပါ၊ သို့သော်ဘ ၀ သည်အမည်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်နှင့်အရိပ်များသာတည်ရှိသည် (သူတို့မတည်ရှိသင့်သည့်အရာများ၌ပင်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်) ။
ဒီအရာတွေအတွက်ရယ်စရာအရာကဒီအုပ်စုများကို "run" တဲ့သူတွေ၊ ငါနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့သူတွေ၊ ပရိုဂရမ်းမင်းမလုပ်ကြဘူး၊ သူတို့က `` ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏စံပြသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုယ်နှိုက်ထက်သာလွန်သည်၊ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်အတွက်။
ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောအရာဟုထင်မြင်သည့်အချက်ကိုအကြမ်းဖျင်းရေးဆွဲတော့မည်။ နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောအချက်များများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဘုံမဟုတ်သောအရာများနှင့်အလွန်ကွာခြားသော်လည်းနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေသည်။
ငါဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဆော့ (ဖ်) ဝဲမှာယုံကြည်တယ် သီးသန့် (အာဏာကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလွတ်လပ်ခွင့်မှတားဆီးပေးသော) ထင် y aprender) အကြီးမြတ်ဆုံးရန်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသိချင်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့သင့်ကိုခွင့်မပြုတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုလို့ငါထင်တယ် ဘာဖြစ်တာလဲသိလား ၎င်းသည်သင်ရရှိနိုင်သောအကြီးမားဆုံးရန်သူဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်နဲ့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ သဘောတူတယ် လက်တွေ့ကျသောအကြောင်းပြချက်များနှင့်နောက်တစ်ခုကိုကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအရအသုံးပြုသူများသည်အရင်းအမြစ်ကုဒ်မှပံ့ပိုးခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်စေလိုကြသည်။
ပြtheနာစတင်သည်အဘယ်မှာရှိအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် လွတ်လပ်ရေး ဖြန့်ဖြူး၏။ Open Source သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲထက်အနည်းငယ်ပိုမိုတင်းကြပ်သည်။ ၎င်းသည်ပconflictsိပက္ခများစွာအတွက်အစဖြစ်သည် အတွေးအခေါ်များ။ ဒါပေမယ့်ငါကအောက်ပါလမ်းမြင်:
ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ အနက်ရောင် software ဖြစ်လာသည် သီးသန့်အဘယ်အရာကိုသင်အမှန်တကယ်သိခွင့်မပေးသော, ဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပျက်? တစ် ဦး ထက်ပိုသောအချက်မှာ မီးခိုးရောင်ငါတို့၌ Open Source ရှိသည် လွတ်လပ်ခွင့်များ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့သင့်ကိုသင်ယူဖို့နဲ့တိုးတက်ဖို့ code ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက် အဖြူ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစံနမူနာများရှိခြင်းအတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်လာလိမ့်မည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲလူတိုင်းကိုကူညီပေးရမယ်။
လူတိုင်းကသူ့လိုပဲ အဖြူကောင်းပြီ, ပိုက်ဆံမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လူတွေဖြစ်မှသာအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အမှုအရာအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ် အလုပ်အကိုင်မရ လိုအပ်။ ဒါဟာတည်ရှိမှုဤအချက်မှာဖြစ်ပါတယ် မီးခိုးရောင် ငါတို့ဘဝမှာစီမံကိန်းတစ်ခုနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကူညီနိုင်ပေမယ့် အခမဲ့ကမ္ဘာကြီးသည်သင့်ထံမှအမြဲတောင်းဆိုသမျှအားလုံးကိုတောင်းဆိုခြင်းကိုရပ်တန့်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
(မူရင်းစာမူတွင်တည်းဖြတ်ရကျိုးနပ်သောခေါင်းစဉ်ကိုထိမိခဲ့သောငါတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အလီဂျန်ဒရိုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလိုသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာသူကပြောကြားသကဲ့သို့အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲသည်ထုတ်လုပ်မှုမပြုလုပ်ဟုသူထင်သည်ကလွဲမှားစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမှန်ကန်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အသိုင်းအဝိုင်းအားကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်ကမ်းလှမ်းပြီး၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိသည့်အခါငွေရေးကြေးရေးမလိုပါဟူသောအချက်ကိုသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲက၎င်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးထားမှုနှင့်အတူငွေလိုအလိုရှိသလောက်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်လာခြင်း။
PS: ဒီအချက်အလက်တွေကိုအသိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင် kernel (အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်) သည်ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများသည်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုယခုအချိန်တွင်ရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်သလော။ )
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တရားမှာဤလောက၌ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးငွေကြေးလိုအပ်နေသည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည် အဖြူ အဲဒါကိုအမြဲတွေ့ရလိမ့်မယ် အနက်ရောင် စျေးကွက်တင်မကစားသုံးသူများ၏စိတ်ကိုလည်းလွှမ်းမိုးသည်။ ပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့အကြွေးတွေအမြဲတမ်းရှိနေမှာဖြစ်ပြီး၊ ငွေလိုချင်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့တခြားအရာတစ်ခုခုလည်းရှိလိမ့်မယ်။
(ထပ်မံ၍ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအမြင်ဖြင့်လက်တွေ့ကျခြင်းထက်စကားပြောခြင်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည် Open Source မဟုတ်ဘဲ Open Source အကြောင်းပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့၏အရင်းအနှီးကို Open Source ပေါ်တွင်အခြေခံသည့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကြောင့်၊ Red Hat နှင့်ဤစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည်။ )
ဤသည်မှာ Gentoo နှင့်စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်အများဆုံးနှစ်သက်သောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ရှေးခယျြ။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းကိုသာဆိုလိုသည် ဆော့ဖျဝဲ, ဒါပေမယ့်လည်းသင်ပေး တစ်ခုစဉ်းစားပါ အတူတူ။ နေရာတိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့လည်းတည်ရှိသည် မူဝါဒကနှင့် နှစ်ဖက်နှင့်အခြား။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတာကလွတ်လပ်မှုဆိုတာအမြဲရှိတယ် ရှေးခယျြအထူးသဖြင့်လာသောအခါတ နှစ်ဖက် သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုမလိုက်နာပါ။ (သင်ဒီမှာတွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း FOSS (အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ) ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းသည်သင်မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် အတွေးအခေါ်များ.)
အ အတွေးအခေါ်များ သူတို့ကကောင်းတယ်၊ အမြင်အသစ်တွေနဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းတယ်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်မည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် ပြဿနာ အုပ်စုတစ်စုလိုလားသောအခါစတင်သည် စည်းကမ်းချက် သူ၏အတွေးအခေါ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Linux လောကတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း "ဒီဟာကပိုကောင်းတယ်" လို့ပြောရင်ကောင်းပါတယ်။
Ubuntu / Fedora / Mint / Manjaro / … Ubuntu / Fedora / Mint / Manjaro / ထက်ပိုကောင်းတယ်။
သူတို့မတည်ရှိဘူး အကြွင်းမဲ့အကောင်းဆုံး, သူတို့ပဲကွဲပြားခြားနားနေဖို့ အတွေးအခေါ်များ.
ငါကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးသည်းခံတတ်သူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ဆီကလာတဲ့အခါမှာဘာမှမကောင်းသလိုဆိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်လေ့ရှိတယ်။ အရာအားလုံးမှာတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပြီးကျွန်ုပ်စဉ်းစားသောအရာများကိုဝေမျှလိုသည် ကိရိယာများ။ လူတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်၏လမ်းစဉ်ကိုလူတိုင်းလိုက်စေရန်မရည်ရွယ်ပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လူအများအသုံးပြုသောအရာများကိုအသုံးမပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မျှဝေရန်ကြိုးစားသည်မှာအခြားသူများက၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရည်ညွှန်းချက်ရှိနိုင် 🙂
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမူလစာသားတွင်ထည့်သွင်းထားသည်ဟုမထင်ပါ (၎င်းသည်အချိန်ကာလဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲစီမံကိန်းများ (git နှင့် kernel, weechat ကဲ့သို့) တွင်ပါဝင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Open ပရောဂျက်များကို အသုံးပြု၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည် ရင်းမြစ် (Gentoo ကဲ့သို့) ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဘို့အလုပ်လုပ်သောသူတ ဦး တည်းစဉ်းစားပါ အလုပ်အကိုင် ပြီးတော့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေများများရလေလေကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ကြိမ်ချင်းစီပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကူညီနိုင်လေဖြစ်တယ် (ဒီဘလော့ဂ်များကဲ့သို့) ။ ယခုဟုတ်ကဲ့၊ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » သန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲများ - အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခု * NIX
အလွန်ကောင်းတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, ငါတကယ်ကြိုက်တယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝကိုထိုနည်းအတိုင်းတွေးသောလူများစွာရှိရန်ကျွန်ုပ်အလိုရှိ၏။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် the အပိုအတွက်ပြန်ခုန်ရန်မမေ့ပါနှင့်😉
ငါ post ကိုကြိုက်တယ်
Ricardo Rios ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏စာကိုဖတ်ရှုပြီးသူတို့ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပုံရသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်ုပ်သည် distros အမြောက်အမြားကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည့်အရာတစ်ခုကိုရှာမတွေ့သေးပါ။ gentoo နှင့်ပတ်သတ်သောအတွေးအခေါ်များကိုကြားရသောအခါကျွန်ုပ်အားကြိုးစားရန်သိလိုပါသည် ယခုတွင်ငါသည် ubuntu ကိုသုံးသည်။ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်နှစ်အနည်းငယ်မှယခုတိုင်အောင်သူကိုမကြိုက်တော့ပါ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ to ဒါကကြိုးစားရမယ့်အရာဖြစ်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ အထွေထွေ🙂စိတ်ကူး - GNU / Linux အားလုံးဟာအတွေးအခေါ်တစ်ခု (သို့) လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲဆိုတာမယုံဖို့၊ ငါတို့မှာဒီမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Megadeth, Rust in Peace အယ်လ်ဘမ်။ ဟဲဟဲ။
လူတစ် ဦး သည်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
ကောင်းမွန်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှု, ငါ Utopia ၏စာပိုဒ်ထဲမှာကွင်းလုပ်လိုပေမယ့်:
"လူတိုင်းဟာအဖြူလိုဖြစ်နေရင်ပိုက်ဆံမလိုအပ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လူတွေဟာလိုအပ်တာကလွဲလို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အခြေအနေတွေကအရမ်းကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်။ "
အဓိကအချက်ကကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သော (သို့) မှန်ကန်သောအငြင်းအခုံဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည်စျေးနှုန်းနှင့်ငွေမဟုတ်ဘဲ FREEDOM နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ငွေရှာခြင်းတို့သည်ပconflictိပက္ခမဖြစ်သင့်သောအရာများဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ (အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအများစုသည်အခမဲ့သော်လည်းဤသည်မှာဥပဒေမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲရောင်းချနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်) ။ ဒီစာပိုဒ်ကိုထောက်ပြချင်တာက၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ပြီးသင်ဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်အတူနေထိုင်ရန်မတတ်နိုင်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်အဓိကအချက်ဖြစ်သောကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသောအရာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်စားရန်အတွက်ငွေရှာ။ မရနိုင်ပါဟုပရိုဂရမ်မာများကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဒါမမှန်ဘူးဆိုရင်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှ ၀ င်ငွေရရှိမှုသည်ပါဝင်ပတ်သက်သူများပေါ်တွင်မူတည်သည်ဖြစ်စေ (၎င်းကိုအလုပ်အကိုင်နှင့် / သို့မဟုတ်လိုအပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်) အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအတွက်စီးပွားရေးပုံစံများရှိသည်၊ ဤစီးပွားရေးပုံစံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်လူတို့၏မှားယွင်းသောလမ်းကိုပြောင်းလဲခြင်း။ သင်ငွေရှာနိုင်သောဤကဏ္ two (၂) ခုတွင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုရရှိကြသည်၊ ကုမ္ပဏီများစွာသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြင့်ငွေအမြောက်အမြားကိုပြသခဲ့သည်။
ဆောင်းပါးပါအချက်များအများစု (၎င်းသည်ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခု) နှင့်အညီ၊ ထိုစာပိုဒ်မှကျွန်ုပ်ရိပ်မိသည့်ထင်မြင်ချက်ကိုသာဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ကလွဲမှားစွာအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းခံထားရသောကြောင့်သင်ပြောသောအရာများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ငါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမှန်ကန်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရပ်ရွာလူထုအားတူညီသောနည်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိသောကြောင့်ငွေရေးကြေးရေးမလိုအပ်ပါ။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲက၎င်းကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် (မြင့်မားသောကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများဖြင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုလိုအပ်ခြင်းကြောင့်) ဤအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်အားသတိပြုမိစေရန်နှင့်မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 🙂နောက်ဆုံးတွင် kernel ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများ ( ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကုန်ကျမည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ယခုရွှေ့ပြောင်းပါ
ပထမ ဦး စွာ၊ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါသည် (စာဖတ်သူများသည်များပြားလှသောအနက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်) သို့သော်သင်ဖော်ပြသကဲ့သို့»ထိုကဲ့သို့သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအကြောင်းအရာများတွင်»ပျံ့နှံ့သောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများသို့မကျရောက်စေရန်သေချာပါသည်။ ဒီထက်ပိုသောအရာများကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘလော့ဂ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တောင်မှမီးမောင်းထိုးပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ) ကံမကောင်းတာကဆန့်ကျင်ဘက်အားသက်သေပြပြီးရင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနဲ့ငွေမရှာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလူအများကကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါပဲ။
(ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BLOBs ရှိသူတွေရဲ့ပြofနာကြောင့် kernel ရဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးငြင်းခုံစရာကောင်းတယ်) ဒါတောင်မှငါနားလည်လိုက်တာ၊ မင်းပြောတာနဲ့ငါသဘောတူတယ်၊ အားလုံးကအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) စသည်တို့စသည့်လမ်းကြောင်းများစွာသို့သွားရန်လမ်းများစွာရှိနေသောအခါယခုဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခုပါ။ စာရေးတာကိုပိုမိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနှင့်နေရာယူခြင်းအတွက်သင်တို့ကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ဒီဟာကလမ်းနှစ်လမ်းပါ၊ အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်မရေးတတ်ဘူး၊ စာဖတ်ရကျိုးနပ်ပြီးတိကျမှန်ကန်တိကျစွာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်တွေရတဲ့အခါငါကျေးဇူးတင်တယ်၊ မျှဝေပါ၊ (ကုသနိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်များနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုရှိသော်လည်း) အခြားအရာတစ်ခုခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်မရေရာမှုများကိုစွန့်ခွာပါက၊ ကျွန်ုပ်သည် (ကမ္ဘာတွင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်) မျက်နှာသာပေးသောဤကဲ့သို့သောကိုက်ညီသောအငြင်းပွားမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၅ နှစ်သာရှိသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် (၂၀၀၈) ကျွန်ုပ်သည် Linux အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကြာမြင့်စွာကတည်းက (၂၀၀၈)၊ အရာရာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့် software ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုမျှကျွန်ုပ်မဖွင့်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်သည်သင်နှင့်အလွန်ကွာခြားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ သာမန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲကိုရွံမုန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux ကိုအသုံးပြုရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ Linux ကိုသုံးရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း (ကျွန်ုပ် KDE ကိုနှစ်သက်သည်) နှင့်ကျွန်ုပ်အားစနစ်ကိုအားစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ update လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် package စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဖြစ်သည်။
Eduardo Vieira ကိုပြန်ပြောပါ
ငါတစ်ကြိမ်ထက်ပိုသောအပေါ်မှတ်ချက်ပေးထားပြီးသကဲ့သို့ကောင်းပြီ, ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များ GNU / Linux ကိုအလွန်🙂နှုတ်ခွန်းဆက်သစေ
မင်္ဂလာပါ။ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အစီအစဉ်၏ပြproblemနာသည်မူပိုင်ခွင့်များသာမကအစီအစဉ်များကိုပြန်လည်ဝေငှရန်လည်းမဟုတ်ပါ။ Open Source အတွေးအခေါ်သည်တံခါးပိတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလက်ခံခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ သို့မှသာသင်၏အဖွဲ့၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
ငါပြောတာကိုကြည့်ရတာလွယ်တယ်။ Open Source ဆော့ဖ်ဝဲ၏ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာ Linux kernel ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သူတို့ဘာလုပ်သည်၊ မလုပ်သည်ကိုမသိခြင်းသို့မဟုတ်မသိရှိနိုင်သောတံခါးပိတ်ဒရိုင်ဘာများစွာကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ရှင်းလင်းသော Open Source distro သည် Ubuntu ဖြစ်သည်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအတွေးအခေါ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အစီအစဉ်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှပိတ်ပစ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ အရာရာတိုင်းဟာလုံးဝပွင့်လင်းရမယ် (ပြုပြင်နိုင်၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲခွဲဝေဖြန့်ဖြူးရမယ်။ ) ဤ software အမျိုးအစား၏ဥပမာတစ်ခုမှာ Linux-Libre kernel ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီး၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုမှာ Trisquel (အတော်များများရပ်တန့်နေသော) သို့မဟုတ် Parabola ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ "မီးခိုးရောင်" အတော်လေးမြင်ရတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုကတော့ Debian ဖြစ်ပြီးမူလက ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်အသုံးပြုလိုသောစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲများပါ ၀ င်သည့်တရားဝင်နီးပါးသိုလှောင်ရုံများကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့တစ်ခါတလေတော့ကုန်ကျတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့သုံးတဲ့ operating system ကို Linux လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းကို GNU, ဒါမှမဟုတ် GNU / Linux လို့ခေါ်တယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ Linux ဟာ kernel ပဲ။
တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ သို့သော်အမှားတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ထင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ Android ကတော့ Linux kernel ကိုသုံးတယ်။ GNU စနစ်များသည်အခြား kernel များဖြစ်သော BSD သို့မဟုတ် Hurd (ဥပမာ Debian GNU / Hurd case) ။
မင်္ဂလာပါ၊ မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်အနေနဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာ linux (kernel) ကိုအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (GPLv2) အနေဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီး၎င်း၏ကုဒ်သည်လုံးဝပွင့်လင်းသည်။ အခြားအရာတစ်ခုမှာအခြားကုမ္ပဏီများထည့်သွင်းသည့် firmware ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ packagers (သို့မဟုတ် packagers) သို့ပေးပို့သည့် သုံးစွဲသူများ (ဤကိစ္စတွင် binary distribution များပင် Open Source ဖြစ်လိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် program ကို ၁၀၀% ပွင့်လင်းမြင်သာစွာမပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်စုစည်းနေစဉ်တစ်နေရာရာမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဟုသင်မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။ ) Kernel developer များအားလုံးတွင်ရှိသည့်အတွေးအခေါ်သည် "ဒိုင်းဒရိုက်များအတွင်း၌ပင်လူတိုင်းရရှိနိုင်သင့်သည်" ဟူသောအချက်ကိုကွန်ဖရင့်အတော်များများကပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ကုဒ်ကလူတိုင်းကိုကူညီသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာကြီးသည်အဖြူရောင်မျှသာမဟုတ်ကြောင်း၊ အမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ hardware များနှင့်ကုမ္ပဏီများက၎င်းကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏သိကျွမ်းမှုအားလူတိုင်းအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊
မင်း ၁၀၀% အခမဲ့ကွန်ပြူတာအကြောင်းမင်းပြောတာကိုငါနားလည်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ကြီးမားတဲ့စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေကတီထွင်ထားတဲ့အထူးစက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာအောင်မြင်ဖို့အရမ်းခဲယဉ်းတယ်။ နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွင် developer များထက်နိုင်ငံရေးလူအများပိုမိုများပြားလာသည်။ (ငါသည်လည်းသူတို့၏စာပို့စာရင်းသို့စာရင်းသွင်းခြင်းခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ချသည်။ ) ၎င်းသည်ထည့် ၀ င်လိုသူများကို“ တွန့်လန့်” ရုံမျှဖြင့်ဆက်ဆံခြင်းနည်းလမ်းသည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။ Linux သည်သင်၏အသုံးအနှုန်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖော်ပြပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်မှတ်သားဖော်ပြခဲ့သည်။ Ubuntu သည်၎င်း၏ရာထူးကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ Android (၎င်းသည်ဂူဂဲလ်မှဖြစ်သောကြောင့်) သည်၎င်း၏အမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ X-district အကြောင်းပြောရန်“ သာမန်” လူတစ်ယောက်နှင့်သင်သွားသည်။ သူတို့ကသင့်ကို…ဘာ ?? ……ပြီးတော့ Linux ပြောတာလဲ၊ သူတို့ကဖြေသည်… Ahhhh ဟက်ကာများနှင့်အိုင်တီသမားများအကြောင်း…ငါ GNU ဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်။ Linux ဆိုတာကောင်းတယ်။ အမြဲတမ်းသင့်တော်တဲ့ connotation လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတောင်းပန်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ... ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရွေးချယ်နိုင်သည် Gentoo ၌ပင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုရန်သင်အသုံးပြုသောလိုင်စင်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် (အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုကျွန်ုပ်ပါ ၀ င်လိုသည့်အနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်လည်း) ယနေ့ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်၊ Laptop ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် driver တွေလိုက်နာပါ။ (ပြီးတော့ငါက Intel card နဲ့အထူးပြု hardware မသုံးပါဘူး။ ) ဒါကကျွန်မမှာဆန္ဒမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်လက်တော့ပ်အတွက်ယာဉ်မောင်းတွေကိုဖန်တီးပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာထားရန်လိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတစ်ခုခုရှိလိုပါကကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင် hardware နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုရန်၎င်းကိုအသုံးချရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ လက်တွေ့ကျသည်မှာငါပြောခဲ့သလိုပင်မီးခိုးရောင်နှင့်အရောင်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါလက်ခံရမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလက်တော့ပ်၊ ဆဲလ်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်ဘာမှသုံးလို့မရဘူး။
Linux kernel ၏ပြissueနာသည်လိုင်စင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့ကအခမဲ့လိုင်စင်မရှိရုံသာမကမည်သည့်အရာကိုပြုလုပ်သည်ကိုလည်းမသိသော firmware ကိုလည်းထပ်ထည့်သည်။ ဤသည်မှာ Open Source လှုပ်ရှားမှု၏ထင်ရှားသောပြသမှု၏နဝမအကြိမ်မြောက်ဖြစ်သောအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲအတွင်းပိတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွင့်ပြုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
“ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲသိချင်ခဲ့တယ်။ သင်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုခွင့်မပြုတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကမင်းအတွက်အကြီးဆုံးရန်သူလို့ငါထင်တယ်။
ဤအချက်မှာ Open Source နှင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သဘောတူသည်) သဘောတူပြီးလက်တွေ့ကျသောအကြောင်းပြချက်များနှင့်နောက်တစ်ခုမှာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်အရင်းအမြစ်ကုဒ်မှထည့် ၀ င်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်စေလိုသည်။
ပြtheနာစတင်သည်မှာဖြန့်ဝေမှုလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သည်။ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးတင်းကျပ်တယ်၊ ဒါကအတွေးအခေါ်ပconflictsိပက္ခအတော်များများရဲ့အစဖြစ်တယ်။
ကျနော့်အမြင်အရပြtheနာကဆော့ဗ်ဝဲကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း (အငြင်းပွားမှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပေမယ့်) ကမစပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါတို့သုံးနေတဲ့ပရိုဂရမ်တွေဘာလုပ်နေတယ်၊ ​​မလုပ်ဘူးဆိုတာ (အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ)၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အလွန်ကြီးမားသော (Open Source) ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်သင်တန်းကသင်မှန်ပါတယ် ကုမ္ပဏီများသည်ဘုံကောင်းကျိုးကိုရှာ။ ကုဒ်နံပါတ်များကိုထုတ်လွှတ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မနေပါ။
FSF ၏ဖော်ပြချက်အရ ၁၀၀% အခမဲ့စက်ရှိခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ၊ တကယ်တော့၎င်းသည်လက်ရှိဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများလိုအပ်သည့်အရံပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ပြaနာရှိပါက၎င်းတို့အားသင်ပေးသောအရာသည်၎င်းကိုလွှင့်ပစ်ရန်နှင့်အခြား ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။ လူအားလုံးသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) လိုအပ်သောငွေများကိုအလွန်စိတ်မ ၀ င်စားကြပါ။ ဒီ (သို့) ဒီပရိုဂရမ်အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများမရှိလျှင်၊ ၎င်းကိုသင်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်တွင်ဆဲလ်ဖုန်းရှိပါက၊ သင်၌တစ်ဝက်မရှိလျှင်ပင်၊ ၎င်းသည်ပြန်လည်ပလီကေးရှင်းထည့်သွင်းထားရမည်။
ငါ GNU / Linux အကြောင်းမပြောခဲ့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက FSF (ငါမဟုတ်တာမင်းသိနိုင်တယ်) ကိုငါကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအဲဒီအချိန်မှာသူတို့မှန်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ လူများသည်၎င်းကို“ Linux” ဟုသိကြသည်မှာမှန်ပါသည် (ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပြူတာများနှင့်မပတ်သက်သော်လည်း GNU / Linux ဟုပြောသောမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်မသိပါ) သို့သော်ဘလော့ဂ်များနှင့်မီဒီယာများကထိုအမှားကိုပင်ပျံ့နှံ့စေကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်။ သူတို့မှားယွင်းတဲ့စကားကြောင်းကိုသိလျှင်။ မနက်ဖြန် Hurd ထွက်လာသည် (ကျွန်ုပ်အလွန်သံသယဖြစ်နိုင်သည်) သို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေမှုအများစုတွင်ပါ ၀ င်သောအခြား kernel တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာကို FromHurd လို့ခေါ်သင့်ပါတယ်။ ငါက kernel ကို operating system ကိုသူ့ဟာသူထက်ပိုမိုအရေးပါမှုကိုပေးထားသည်ထင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ။ အဲလန်လုပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ such ထိုကဲ့သို့သောနေရာသေးသေးလေးအတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန်မလွယ်ကူပါ။ (ဤအဆင့်တွင်ဤစာမူနှင့် ပါတ်သက်၍ ဤပြaddressesနာကိုဖော်ပြထားသည့်စာရင်းတွင်နောက်ထပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ) 😛) ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ၊ ငါဟာဒီသေးငယ်တဲ့နေရာမှာရှင်းပြနိုင်တယ်လို့နားလည်ထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုယူပြီးပါပြီ။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့မလုံလောက်သေးပုံရတယ် က။ ကျွန်ုပ်တို့သည် kernel ပြissuesနာများကို (developer အနေနှင့်အသုံးပြုသူ၊ ပြင်ပအေးဂျင့်တစ်ခုအနေနှင့်နှင့်တရား ၀ င်ပြasနာအနေနှင့်) အကြောင်းများစွာဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ပြီးအခြေအနေအတိအကျကိုရှင်းလင်းနိုင်ပြီးအများသဘောတူညီမှုကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားပို့စ် for ကျန်လိမ့်မည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် (ဤသည်မှာကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်သည်) GNU နှင့် linux ပရိုဂရမ်များစွာတွင်မရေမတွက်နိုင်သော source code လိုင်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ဤအဆင့်တွင်ခြေလှမ်းတစ်ခုစီ၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုအတိအကျသိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သီအိုရီဆိုင်ရာအရာများစွာကိုသိရှိထားခြင်းအပြင်ကုဒ်သည်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်၊ မည်မျှမကြာခဏ၊ အဘယ်ကြောင့်နှင့်အခြားမေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အနိမ့်ဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည့်ပရိုဂရမ်များဖြင့်မြှောက်ပါကသိရန်လိုအပ်သည်။ system (Linux From Scratch စတိုင်) တွင်သူတို့သည်အလုပ်ကိုအတော်အတန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ငါကဒီဟာကအရေးကြီးတဲ့ပြbeနာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာ၊ နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်အရာအားလုံးရဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုအတိအကျဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိနေတယ်။ ပြSourceနာက Open Source (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) နှင့် Free Software (တစ်ခုလုံးနီးပါးနီးပါး) တွင်အနည်းဆုံး code သည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခြားနားချက်များစွာရှိသည်။
အကယ်၍ Alan နှင့် ChrisADR နှစ်သက်ပါကအခမဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်ကျွန်ုပ်အဆိုပြုထားသည် - မည်သူမဆို၎င်းကိုဝေမျှ။ ပြုပြင်နိုင်သည်၊ အချို့အချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁ - စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းကိစ္စကိုထိပါ။ ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုထင်မြင်သည့် (အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲအကြားခြားနားချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း) တင်ပြသောနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မှားယွင်းစွာတွေးတောခြင်း - တစ်ခုသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားတစ်ခုမှာစပိန်ဘာသာဖြစ်သည်။
2 - GNU / Linux ကဲ့သို့သောပြသနာများကိုအမည်ပေးခြင်း (ဤအကြောင်းအရာသည်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေ။ ဖော်ပြထားသောအခြားအရာများထည့်သွင်းရန်၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့အားအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်) ။
၃။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ဒဏ္(ာရီများ (ဤအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်)၊ သူတို့တွင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်ငွေရှာ။ အခမဲ့နှင့်စျေးနှုန်းနှင့်သဘောတူစာချုပ်၏သဘောတရားများနှင့်အခင်းအကျင်းများကိုကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်။
ငါရေးသားရန်အချိန်အတန်ကြာစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသောကြောင့်အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်ကိုသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤအဆိုပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်ထံတင်ပြပါသည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်းပါးများတွင်ကွဲပြားသောနည်းဖြင့်သူတို့ကိုဖြေရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်) သို့သော်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဘလော့ဂ်များအပေါ်တွင်ပိုမိုသက်ရောက်မှုများနှင့်ပျံ့နှံ့မှုရရှိရန်အတွက် စုပေါင်း၍ နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လေးစားပါတယ်
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းသောအကြံအစည်တစ်ခုဟုထင်ရသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ကြိမ်ထက်မကရေးသားခြင်းကိုလည်းအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကို၎င်းနှင့်ဤနေရာတွင်နှစ်မျိုးလုံးရှိစေလိုသည်။ သို့မှသာပိုမိုဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သည်သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်မည်လား (ကျွန်ုပ်သည်စကားလုံး ၁၅၀၀ ထက်မပိုသောအလေ့အကျင့်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်😛) ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုကဲ့သို့သောသိပ်သည်းသောအကြောင်းအရာသည်မှန်ကန်သောရရန်အတွက်စီးရီးတစ်ခုလုံးကိုယူနိုင်သည်။ သင်တန်း။ အကယ်၍ အလန်လည်းစိတ်ဝင်စားလျှင်၎င်းသည်ညှိနှိုင်း။ ထွက်ပေါ်လာသည့်အရာများကိုကြည့်နိုင်သည်
Diego Silverberg ဟုသူကပြောသည်
သင်ဖော်ပြသော "အတွေးအခေါ်" ၏ထိုအယူအဆမှာအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ဒPhilနိကဗေဒများသည်ကမ္ဘာ့အမြင်များ၊ ၎င်းတို့သည်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုပုံစံများနှင့်အမှန်တရားကိုဖော်ပြရန်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏စနစ်များဖြစ်သည်
ကွန်ပျူတာအသိုင်းအဝိုင်းအများစုသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်များနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ဘဲနှင့်အတွေးအခေါ် (သို့) နိုင်ငံရေးစသည့်ခေါင်းစဉ်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်လျစ်လျူရှုသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်စိတ်ပူသည်။
ဆက်သွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပင်အတွေးအခေါ် (၃) ခုကိုမီးခိုးရောင်စကေးအဖြစ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်မမှားပါ
ပုဂ္ဂလိက၊ ပွင့်လင်းမှုနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဤနည်းဖြင့်တင်ပြခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အကြားပtheိပက္ခမှလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ချဉ်းကပ်မှုမှခွဲထုတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာအားလုံး ၀ ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုထိခိုက်နာကျင်စေသည့်တိုင် "ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သောကျွန်ုပ်လိုချင်တာကိုလုပ်သည်" ကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုထားသည်
Open ALSO သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျစ်လျူရှုသည်။ software သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါက၎င်းသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ၊ မသက်ရောက်သည်ဖြစ်စေလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အနည်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်ကုဒ်ကိုမြင်နိုင်သည်ဟုသာပြောရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာမှာ ၄ င်းတွင်ရှိသည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများအားလုံးနှင့်… and open source ၏ကာကွယ်သူများသည် code ကိုရရှိနိုင်စေရန်သာစိတ်ဝင်စားသောကိရိယာများအားလုံးတွင် android ဖြစ်သည်။
လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုင်တွယ်သည်ဟုဆိုသူ၊ အယ်ဒီတာတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်ပြီးလူမှုရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်ကုဒ်နံပါတ်ကိုမြင်သာမြင်သာရှိစေရန်နှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ လူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်းများစသဖြင့်မထိခိုက်စေရန်အခြေခံမူများကိုဂရုပြုပြီးရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ရေးသားတဲ့သူကအန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ပမာဏမရဘူး
သင်ပြုလုပ်သည့်အဆိုပြုချက်သည်လုံးဝအသုံးတည့်သည်။ ပါတီများအားလုံးတန်းတူညီမျှဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အတွေးအခေါ်အငြင်းပွားမှုသက်သက်သာဖြစ်သည်။ သဘောမတူသူများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်စည်းကြပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောတံခါးပိတ်လူများဖြစ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်စွမ်းအားအုပ်စုများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနှင့်ပpowerိပက္ခဖြစ်ကြပြီး၊ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်တည်ရှိပြီးအင်အားချိန်ခွင်လျှာညီမျှစေရန်နှင့်အားနည်းချက်များကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည် (အားလုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်နည်းပညာတွင်စွဲမြဲနေသောကြောင့်)
နိုင်ငံရေးဝါဒကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ လယ်ပြင်ကိုပြန်လည်နေရာချထားရန်လိုအပ်သည်။ FSF သည်သူရဲဘောကြောင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကို software နှင့်နည်းပညာအကြောင်းပြောဆိုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်သည်။ တင်းကြပ်စွာနိုင်ငံရေးအလုပ်မှဆက်ကပ်အပ်နှံသည်
Diego Silberberg သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မျှဝေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုမှစပြီးရေးသားထားတာတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲမှားမှုကြောင့်ပေါ်ထွက်လာနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်။
ပထမအချက် - စာသားမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း၊ ဒါဟာရှုပ်ထွေးပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့၊ ကိုင်တွယ်ရခက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ၊ ကျင့် ၀ တ်၊ နိုင်ငံရေး၊
ငါလုပ်နေတာကကျနော့်အမြင်ကိုပြောတာပါ (သူကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပေမယ့်လည်းသူမပါ ၀ င်တဲ့သူဟာဆက်နွယ်တဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆက်စပ်မှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးအမြင်တစ်ခုဖန်တီးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါသည်လည်းအတွေးအခေါ်ပညာ၊ ကျင့် ၀ တ်နှင့်ကျင့် ၀ တ်တရားအနည်းငယ်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး ဖြစ်၍၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကျဉ်းချုပ်လျှော့ချရေးကိုသင်စဉ်းစားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်သုံးမည့်နေရာပမာဏနှင့်သက်ဆိုင်သောမှန်ကန်သောသီအိုရီမူဘောင်တစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ရှင်းပြချက်။
ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ကိုအတွေးအခေါ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသေချာတာကတော့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ရှုထောင့်သုံးခုစလုံးကဘ ၀ နဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့တူသင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုကမ္ဘာကရှုမြင်ကြလို့ပဲ။
ပြီးတော့မီးခိုးရောင်အတိုင်းအတာကိုအနည်းငယ်မှတ်ချက်ပေးဖို့အတွက်၊ Libre မစဉ်းစားတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးဒီနေ့ကိုအပြည့်အဝမဖြေရှင်းနိုင်သေးတာတစ်ခုရှိသေးသည်။ Libre သည်ကမ္ဘာ့ပါရာဒိုင်းအဖြစ်အခိုက်အတန့်၌စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲသို့မဟုတ်အားလုံးသောအရာများမရှိပါ။ ထိုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ထိုအလုပ်အပေါ်မှီခိုပြီးနေထိုင်ကြသူအားလုံးမည်သို့ဖြစ်သွားသနည်းစီးပွားရေးအရ (ထုတ်လုပ်မှုအလွန်ဆိုးရွားစွာဖြန့်ဝေထားသည့်တိုင်) သန်းခေါင်စာရင်းသည်ထိုအလုပ်သမားများနှင့်သူတို့၏မိသားစုများ၏ဗီဒီယိုကိုဖြေရှင်းရန်မှော်အရပေါ်လာလိမ့်မည်လော။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကာကွယ်ပေးရန်ဆိုသောအသိုင်းအဝိုင်းတွင်လည်းမပါဝင်ပေလော။ ငါဆောင်းပါးထဲမှာပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အရာရာတိုင်းဟာအနက်ရောင်ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ငါတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘ ၀ ဟာအမည်းရောင်ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်သက်သက်မျှသာမဟုတ်ပါဘူး၊ utopia အတွက်သာအလုပ်လုပ်တယ်၊ Utopia ကတော့လုံးဝအဖြူရောင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အကယ်၍ အနက်ရောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမားတဲ့ပြproblemနာကိုရင်ဆိုင်နေကြလို့ပါ။
ပြီးတော့ငါပြောတာကဒီကိစ္စကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းဖို့ဖြစ်တယ်၊ ငါပြောခဲ့တာနဲ့အလေးပေးပြောတာက၊ အစွန်းရောက်။ သူကသူမှန်ကန်သည်ဟုယူဆသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်မလုပ်ရန်သူရဲဘောကြောင်သူကိုခေါ်ရန်မပြောရ။ အကြောင်းမှာသူ၏ကမ္ဘာ့အမြင်တွင်အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုသူ / သူမ၏ဖခင် / မိခင်ကသူရဲ့အလုပ်ကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာသူလုပ်ကျွေးတာကိုသူရဲဘောကြောင်သူလို့ပြောနိုင်မလား။
တိုက်ပွဲမှာပါဝါအုပ်စုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး၊ ဒီအချိန်မှာ FSF ရဲ့မအောင်မြင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားရမယ့်အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေဟာ FSF ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ အသုံးပြုသူနှင့် FSF သည်၎င်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိသော်လည်းဆန့်ကျင်စွာအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေနောက်လိုက်များအားအစွန်းရောက်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောတစ်ယူသန်ဆန်မှုနှင့်ခြိမ်းခြောက်သည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် "အခမဲ့" ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အများစုသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်သေလုနီးပါးဖြစ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုတွင်မူ developer များထက်နိုင်ငံရေးသမားများပိုများလာပြီး၎င်းအနေဖြင့်၎င်းသည် Free World Foundation သို့မဟုတ်အခြားတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာသင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အများကြီးကျန်ကြွင်းစေ: /
ကောင်းပြီ၊ ငါလည်းရှင်းပြရ ဦး မည်၊
မီးခိုးပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ သင်နားလည်ပါကကမ္ဘာပေါ်တွင်စီးပွားဖြစ်ပွင့်လင်းသောဆော့ဖ်ဝဲများရှိနေပြီးလူများကသူတို့ထုတ်လုပ်သည့်စျေးကွက်များမှ ၀ င်ရောက်လာပြီးအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဟုခေါ်ခြင်းသည်၎င်းတို့ကိုအဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဒီနေရာမှာမေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကစီးပွားဖြစ်နဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရာတွေကိုအစားထိုးသင့်တယ်လို့ဘယ်သူကပြောသလဲ။ .. ဘာဖြစ်သင့်သလဲ။
ငါ gnu / linux ကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုက windows တွေဖြန့်ချိလိုက်တာပါ (ဆိုလိုတာကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ) (ဥပမာတစ်ခုပြောရန်ဖြစ်သည်) ဘယ်သူမှမဆို windows စျေးကွက်တစ်ခုလုံးအသေခံသင့်တယ်၊ အရူးအမူးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုပိတ်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့သင်လွတ်သွားစရာမလိုပါဘူး
ဟုတ်ပါတယ်၊ တချို့လူတွေကဒီဆော့ဗ်ဝဲတွေရဲ့အထူးကောင်းကျိုးများမှသီးသန့်နေထိုင်ကြသည်၊ စျေးကွက်ထဲမှမဟုတ်ဘဲစံချိန်တင်ကုမ္ပဏီသည်ဂီတပညာရှင်ကိုလုယက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်နေထိုင်သည်၊ သူတို့သည်စျေးကွက်အသစ်များပေါ်ပေါက်လာရန်ပျောက်ကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရမည်။ အချိန်တိုအတွင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ "အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုရယူကြစို့၊ လမ်းပေါ်မှာကျန်နေသူမည်သူမဆိုအသုံးမပြုနိုင်အောင်အခွင့်အရေးရအောင်လုပ်လိုက်တာဟာမကိုက်ညီတာဖြစ်လိမ့်မည်" ဟူသောမေးခွန်းမဟုတ်ပါ
အခြားအချက်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ "အစွန်းရောက်ရန်မသွားခြင်း" ၏အနက်ကိုသင်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်အနက်ဖွင့်သတ်မှတ်သည်ကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ကလေးသို့မဟုတ်သူ့အဖေကိုသူတို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုမပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ န်ထမ်းမှမည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိဘဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်
လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နိုင်သည့်နိုင်ငံရေးပြissueနာကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုဖောက်ဖျက်သောကြောင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်ရပ်တည်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်၎င်းသည်သူရဲဘောကြောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသူတို့ကိုငါပြောလျှင်၎င်း။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည်နိုင်ငံရေးရာထူးကြီးကြီးမားမားနည်းပါးသည်
ဒါပေမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကျင့် ၀ တ်ရေးရာမှာတာဝန်ရှိတယ်၊
FSF နှင့် ပတ်သက်၍၊ သင်ဖော်ပြသည့်တစ်ယူသန်ဝါဒကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအခြေခံအုတ်မြစ်၏ခြေရာကိုအနီးကပ်လိုက်လျှောက်ပြီးမီဒီယာများက၎င်းကို "တစ်ယူသန်ဝါဒ" ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ သင့်ရဲ့အနေအထားကတသမတ်တည်းသို့မဟုတ်မဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစု၏လှည့်စားမှုကိုခံယူရန်သင်ခွင့်မပြုခဲ့ခြင်းမှာအများစုသည်မှန်သည်၊ မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘဲတစ်ယူသန်ဝါဒဟုခေါ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ဖြန့်ဖြူးတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာဆင်းရဲတယ်၊ ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာတွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဆိုတာသဘောတူတယ်။ သူတို့မှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကြီးတွေလုပ်ဖို့ဘတ်ဂျက်မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအနည်းဆုံးသူတို့ကြိုးစားတယ်။ ရှေးယခင်ကမည်သည့်ရုန်းကန်မှုကိုမဆိုပယ်ဖျက်ခဲ့သောအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနိုင်ငံရေးရုန်းကန်မှုတွင်အရေးယူသင့်ကြောင်းထောက်ပြသည်
ဟိုင်းဒီယို၊ အဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂ကောင်းပြီ၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ဒီဟာကဆွေးနွေးပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ပြပွဲနှင့်ထိုက်တန်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤတိုတောင်းသောမှတ်ချက်များဖြင့်အတွေးအခေါ်ကိုမှန်ကန်စွာတည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲပြီး၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်သလောက် အထင်လွဲမှားမှုများအတွက်ကွာဟချက်ကိုထားခဲ့ဖို့။ ဒါပေမယ့်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် try ကြိုးစားမယ်🙂
ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုစတင်ခြင်းနှင့်စတင်ကြပါစို့။ ဤရည်မှန်းချက်သည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှအရက်သို့မဟုတ်စီးကရက်ကိုဖယ်ရှားလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ထိုအကြောင်းအရာကိုအနည်းငယ်ပိုမိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ရာကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လွတ်မြောက်ခြင်းဟူသောအချက်သည်လူ့သဘောသဘာဝအရဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် (တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်စေ) တစ်ခုခုကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်မလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်မှုကိုပပျောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်လူသားဖြစ်မှုကိုနှိမ်နင်းရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်တူသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ကောင်းမကောင်းဆိုးကျိုးများကိုအတူတကွပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မွေးရာပါဖြစ်သည်။
အချို့သောကုမ္ပဏီများတွင်မူလွတ်မြောက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သော်လည်းအချို့မှာမူသူတို့၏စျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်များအားလုံးလုံးဖျက်ဆီးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ငါယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ပကတိအဓိပ္ပာယ်ကနေနည်းနည်းထုတ်ယူ: «။ ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ချက် အပေါ် အာရုံကြောစနစ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အသိဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်, သင်၏ခံစားချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်သောခံစားမှုများကိုခံစားခြင်းနှင့်အဘယ်သူ၏ ထပ်ခါတလဲလဲစားသုံးမှု puede မှီခိုဖန်တီးပါ သို့မဟုတ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည် မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။ "
operating system များ၊ ပရိုဂရမ်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ကြော်ငြာအသစ်များသည်သင်၏အာရုံကိုအဘယ်ကြောင့်ခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟုသင်ထင်သနည်း။ 🙂ကောင်းပြီ၊ မဟုတ်ရင်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်သူမှမလိုအပ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဂိမ်းအတွက်အထူးစက်ပစ္စည်းမလိုအပ်ဘူး၊ မှီခို ဂိမ်းများကိုရန်။
ပြီးတော့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံး၏အုပ်စုတစ်ခုတည်းကိုသာလွတ်မြောက်ခြင်းကကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်ကိုင်စေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသွားကြည့်ကြစို့။ မဟုတ်ဘူး စျေးကွက်ကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်ကျန်ရှိနေသေးသောပုဂ္ဂလိကသက်ရှိဖြစ်သော်လည်းလူ့သဘောသဘာဝအရငါဖော်ပြပြီးခဲ့သည့်အတိုင်း၊
ဒုတိယပြissueနာကိုအနည်းငယ်ထိတွေ့ရန်အသင်းအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို၎င်းတို့သည်တစ်ယူသန်ဝါဒသို့ပြောင်းလဲသွားသည့်အခါအစွန်းရောက်မှုများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ရန်လိုသည်းမခံ အမြင်သို့မဟုတ်ရည်ညွှန်း၏အခြားအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြီးတော့အဲဒါကိုဖျက်သိမ်းပစ်သင့်တယ်လို့ငါမပြောဘဲ၊ အသိအမြင် FSF ကဲ့သို့သောအလောင်းများသည်ဖြစ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အမြင့် သူတို့ကြေငြာသောမက်ဆေ့ခ်ျကို။ ပြီးတော့အဲဒါကိုဆိုလိုတာကခင်ဗျားဟာဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာမရှိဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆတာကိုတခြားသူတွေကရိုင်းစိုင်းတယ်၊ ရန်လိုမုန်းတီးမှုလို့မြင်တယ်၊ ဒါကတန်ဖိုးတွေကိုကာကွယ်သူလို့ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဖြစ်မယ် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ မြင့်မားသော, မက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်ခုအကြွင်းမဲ့အာဏာမကိုက်ညီသည်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည်ကောင်းသောရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူသည်လူအများပြောသောစကားများကြောင့်လက်မောင်းကိုလှည့်မပေးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူအားပြောခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒီထက်ပိုပြီးပိုမှန်အောင်ပြောပါတော့ caridad။ ဒါအမှန်ပဲ၊ ဘောင်း တကယ့်ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုထောင့်ရှိရန်ရှိသော်လည်းဤရှုထောင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောအမြင်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ပါက၊ အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ခြင်း၏လမ်းစဉ်တွင်ထင်ဟပ်သည်ဆိုသည့်အချက်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
ငါဒီရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုတကယ်သဘောကျတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမည်းရောင်နဲ့အဖြူအစရှိတဲ့အစွန်းရောက်စံတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါစဉ်းစားမိလို့ပါ။ ငါ "ဒီဟာအခြားတွေထက်ပိုကောင်းတယ်" လို့မပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်ကိုဝေမျှသည်။ အထူးသဖြင့် linux vs windows နှင့် mac လောကမှာ၊ ငါတို့မှာမတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနည်းလမ်းများရှိကြသောကြောင့် Linux၊ open source နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာမင်းနဲ့မတူကွဲပြားစွာတွေးထင်ပြီးစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုသောအခြားလူများနှင့်အမြဲတမ်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုအခြားနည်းများကိုပြရန်ကြိုးစားသည်၊ လျှော့ချရန်မလိုသောကြောင့်သူတို့ကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းသည်။